भुइँकटहरको खेती कहाँबाट सुरु गरिएको हो भन्नेबारे त्यति स्पष्ट छैन । तर यसलाई क्रिस्टोफर कोलम्बसले विश्व भ्रमणपछि सन् १४९३ मा यसलाई युरोप भित्र्याएको अनुमान गरिन्छ । पहिले अमेरिकाको हवाइमा यो ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन्थ्यो । स्वास्थ्यको फाइदाका हिसाबले भुइँकटहरलाई अदभूत फल मानिन्छ । अहिले पाराग्वे, ब्राजिल, फिलिपिन्स, कोस्टारिका लगायतका देशमा भुइँकटहरको धेरै खेती हुने गरेको छ।
स्वास्थमा हुने फाइदाहरु:
– दममा राहत दिन्छ
– प्रजनन क्षमतामा वृद्धि गर्छ
– छालाको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक
– मुखको स्वास्थ्यमा उपयोगी
– दृष्टि सुधार गर्छ
– रक्तचाप नियमित गर्छ
– मुटुको रक्षा गर्छ
– रक्त सञ्चालनमा सुधार गर्छ
– मिर्गौलाको पत्थरी निकाल्छ
– बान्ता आउन सक्छ
– मुख र गाला सुन्निन सक्छ
– छालामा दाग आउन सक्छ
– पखाला लाग्न सक्छ
– टाउको दुख्ने र रिँगटा लाग्न सक्छ।
– भुइँकटहरमा भएको ब्रोमिलेन तत्वका कारण धेरै खाएका बेला दाँत कुँडिन सक्छ ।
– मधुमेहका बिरामीले क्यानमा राखिएको जुस सेवन गर्नु हुन्न, त्यसमा बढी मात्रामा चिनीको प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
– गर्भवती महिलाले धेरै भुइँकटहर खानाले गर्भपतन हुने खतरा हुन्छ ।
– यसमा पोटासियम पाइने भएकाले मिर्गौलाका बिरामीले खाँदा ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ ।
ज्ञानविज्ञान पढिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ।
Topics #भुइँकटहर #भुइँकटहर खाँदाका फाइदा #भुइँकटहरका फाइदा
Don't Miss it यस्ता छन् तोरीको तेलका उपयोगी फाइदाहरु
यस्ता छन्, दाँत चम्किलो बनाउने केहि घरेलु उपाय
१. कागती–नुन : कागतीमा केही नुन मिलाउने र त्यसलाई दाँतमा रगड्ने । केही समय त्यसै छाडिदिने र पानीले धुने ।…
फिट्कीरी को उपयोगिता
१. आँखाको रोगमा सानो शिशी गुलाफ जलमा २ चिम्टी फिट्कीरीको धूलो मिसाएर राख्नुहोस् र आँखा रातो भएमा, चिप्रा लागेमा, आँखा…